Kitts & Nevis ihlaziya iimfuno zohambo kubagonyiweyo ngokupheleleyo abahambi bomoya bamazwe aphesheya | Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis » I-St. Kitts & Nevis ihlaziya iimfuno zohambo zabagadi bamazwe apheleleyo abagonywe ngokupheleleyo
I-St. Kitts & Nevis ihlaziya iimfuno zohambo zabagadi bamazwe apheleleyo abagonywe ngokupheleleyo
I-St. Kitts & Nevis ibhengeza utshintsho kwiimfuno zokuhamba zabahambi bamazwe aphesheya, abafika ngenqwelo moya, abagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19
Umhambi uthathelwa ingqalelo agonywe ngokupheleleyo xa iiveki ezimbini zidlulile okoko wafumana idosi yabo yesibini
Abagadi bomoya abagonywe ngokupheleleyo baya kucelwa ukuba “Babe kwindawo efanelekileyo” kwihotele evunyiweyo yokuHamba iintsuku ezilithoba kuphela
Umhambi kufuneka agcwalise iFom yokuGunyazisa uKhenketho kwiwebhusayithi yesizwe
Inkulumbuso yase-St. Kitts kunye ne-Nevis, uGqirha oHloniphekileyo u-Timothy Harris ubhengeze utshintsho kwiimfuno zohambo kwabo baHambi baMazwe ngaMazwe, befika ngenqwelomoya, abagonywe ngokupheleleyo i-COVID-19 nge-1 kaMeyi 2021.
Abahambi bamazwe aphesheya abagonywe ngokupheleleyo bayacelwa ukuba bangenise iKhadi labo leRekhodi yokuGonya esemthethweni xa begqibezela inkqubo yabo yokugunyazwa kukhenketho kwiwebhusayithi yesizwe, ukongeza kuvavanyo lwe-RT-PCR lweyure ezingama-72 kunye nolunye uxwebhu olufunekayo lokuhamba.
Nceda ubone ngezantsi iimfuno zokuhamba zabahambi ngeenqwelo moya zamazwe aphesheya ngoMeyi 1, 2021:
Umhambi uthathwa ngokuba ugonywe ngokupheleleyo xa sele kudlule iiveki ezimbini emva kokufumana idosi yesibini yethamo lokuthintela idosi (Pfizer / BioNTech, Moderna okanye AstraZeneca / Oxford) okanye kwiiveki ezimbini emva kokuba befumene iyeza lokuthintela idosi elinye (Johnson + Johnson). Ikhadi leRekhodi yokuGonya ye-COVID-19 esemthethweni iya kwamkelwa njengobungqina.
Abagadi bomoya abagonywe ngokupheleleyo baya kucelwa ukuba “Babe kwindawo efanelekileyo” kwihotele evunyiweyo yokuHamba kwiintsuku ezilithoba kuphela (9) xa kuthelekiswa neentsuku ezili-14 ezikhoyo ngoku.
Ukususela ngoMeyi 20, 2021 abagonyo bomoya abagonyelweyo ngokupheleleyo baya kuvunyelwa ukuba bangene kwiindawo zemidlalo zokufikela.
Umhambi kufuneka agcwalise iFom yokuGunyazisa uKhenketho kwiwebhusayithi yesizwe kwaye alayishe iziphumo zovavanyo ezingekho mthethweni ze-COVID-19 RT-PCR ezivela kwi-CLIA / CDC / UKAS evunyiweyo ilebhu evunywe nge-ISO / IEC 17025 esemgangathweni ethathwe iiyure ezingama-72 ngaphambi kohambo. Kuhambo lwabo, kuya kufuneka beze nekopi yovavanyo olubi lwe-COVID- 19 RT-PCR kunye neKhadi labo leRekhodi yokuGonya ye-COVID-19 njengobungqina bokugqitywa kogonyo lwabo. Nceda uqaphele, iimvavanyo ezamkelekileyo ze-COVID-19 PCR kufuneka zithathwe sisampulu ye-nasopharyngeal. Iisampulu ezizimeleyo, iimvavanyo ezikhawulezayo, okanye iimvavanyo zasekhaya ziya kuthathwa njengezingekho mthethweni.
Yenza uvavanyo lwezempilo kwisikhululo seenqwelomoya kubandakanya ukujonga ubushushu kunye nephepha lemibuzo lezempilo. Ukufika kwabo, ukuba umhambi ogonywe ngokupheleleyo ubonakalisa iimpawu ze-COVID-19 ngexesha lokuvavanywa kwezempilo, banokucelwa ukuba benze uvavanyo lwe-RT- PCR kwisikhululo seenqwelomoya ngeendleko zabo (i-150 yeedola).
Bonke abagadi bomoya abagonywe ngokupheleleyo bakhululekile ukuhamba kulo lonke ihotele evunyiweyo yokuHamba, basebenzisane nezinye iindwendwe kwaye bathathe inxaxheba kwimisebenzi yehotele kuphela.
Abahambi bomoya abagonywe ngokupheleleyo abahlala ngaphaya kweentsuku ezili-9 kufuneka bavavanywe ngomhla we-9 (iindleko zeendwendwe ezingama-USD ezili-150) zokuhlala kwabo kwaye xa uvavanyo lwabo lubi, banokudibanisa kwiFederal bathathe inxaxheba kukhenketho, iindawo ezinomtsalane, iivenkile zokutyela, imivalo yolwandle, Ivenkile yokuthengisa, njl.
Ukusukela ngoMeyi 1, 2021 abagonyiweyo abagadi bomoya abagciniwe ukuba bangenise uvavanyo lwe-RT-PCR. Ukuba uvavanyo lokuhamba ngaphambi kwexesha lisafuneka kwilizwe oya kulo, uvavanyo lwe-RT-PCR luya kuthathwa kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba. Umzekelo: Ukuba umntu uhlala iintsuku ezisi-7, uvavanyo lwabo lokuhamba ngaphambi komhla luya kuba lusuku lwe-4; ukuba umntu uhlala iintsuku ezili-14, uvavanyo lwabo lwangaphambi kokuhamba luya kuthathwa ngomhla we-11.